Durbaanka Qabiilka: Farmaajo oo kaarka qabyaaladda xoqanaya | KEYDMEDIA ONLINE
Durbaanka Qabiilka: Farmaajo oo kaarka qabyaaladda xoqanaya
Farmaajo oo muddada xil-heyntiisu idlaatay lix bil ka hor, ayaa isku dayay inuu kaarka qabiilka u adeegsado baajinta safarka Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda JFS uu maanta ku tagay Kenya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waftiga uu hoggaaminayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble, ee maanta gaaray Kenya, ayaa saaka muddo saacado ah ku xayirnaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, kadib markii diyaaraddii qaadi lahayd ay xilli danbe ku wargalisay in aysan u safri karin Mombasa.
Sida ay Keydmedia Online ka soo xigatay howl-wadeenno ka tirsan Xaafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Farmaajo oo adeegsanaya durbaanka qabiilka, ayaa masuuliyiinta shirkadda, uu duulimaadkeeda ku qornaa RW Rooble, ka dhaadhiciyay in aysan qaadin waftiga maadaama ay isaga ku qabiil yihiin.
Rooble oo akhbaartu soo gaartay xilli danbe, ayaa mar kale diidmo duulimaad kala kulmay labo shirkadood, oo masuuliyiinta ugu sareeya ay Farmaajo ku heyb yihiin, kadib markii ay Madaxtooyadu xiriir la soo sameysay, si loo baajiyo socdaalka Eng: Maxamed Xuseen Rooble.
Ugu danbeyn Ra’iisul Wasaaraha, ayaa go’aansaday inuu gabi-ahaanba gees ka maro diyaaradaha ay masuulka ka yihiin ganacsatada heyb ahaanta ugu xiran xaafiiska Farmaajo, wuxuuna ugu danbeyn raacay diyaarad ay leedahay shirkadda Salaam Air Express, oo siyaasad ahaan iyo qabiil ahaanba ka madax bannaan Farmaajo.
Ilo-wareedyo ku dhow madaxtooyada ayaa KON u xaqiijiyay in dagaalkii u dhexeeyay PM Rooble iyo Madaxweynaha muddo xileedkiisu uu dhamaaday uu sii xoogeystay, kadib markii xalay ciidamo fara badan lagu soo daadiyay dariiqyada magaaladda Muqdisho si loo xakameeyo safarka Ra'isul Wasaaraha.
Tan iyo markii uu soo if-baxay socdaalka Rooble ee Kenya, Kooxda Farmaajo, ayaa bannaanka soo dhigtay dagaalka labada xaafiis, waxayna 23-kii bishii na-weydaaratay, hor istaageen guddoomiyihii hore ee Gobolka Gedo Mucalimow, oo ku wajahnaaa Doolw, si ay u jabiyaan amar Ra’iisul Wasaare oo la xariiray arrimaha socdaalka.
Tallaabadaas ayaa ugu danbeyn sababtay in khilaafku sii xoogeysto, kadib markii wareegto kasoo baxday xafiiska Ra’iisal wasaaraha xilkii looga qaaday Madaxii Shaqaalaha ee Hay’adda NISA C/llaahi Aadan Kulane (Jiis) iyo Taliyahii Nabadsugida ee Garoonka Aadan Cadde Cabdiwahaab Sheekh Cali.
Farmaajo oo muddada xil-heynta ka idlaatay lix bil ka hor, ayaa 7-dii bishaan soo saaray wax uu ugu yeeray wareegto, uu hay’adaha dowladda ku faray in aysan gali kari heshiisyo, taas oo uu uga gol-lahaa carqaladeynta safarka Ra’iisul Wasaaraha, hayeeshee Rooble, ayaa taas baddalkeeda tilmaamay inuu Xukuumaddiisu dalka masuul ka tahay xilligan, kuna dhaqmeyso sharcida dalka u yaalla oo kaliya
Kooxda Fahad iyo Farmaajo hoggaamiyaan, oo u muuqday in ay qaadeen tallaabo kasta oo ay is lahaayeen waa lagu baajin karaa safarka Wasiirka koobaad ee Xukuumadda Xil-gaarsiinta, ayaa xalay amray in la la jaro jidadka muhiimka ah ee Muqdisho, hayeeshee, qorshahaasi ma suura galin.
Ugu danbeyn, tallaabada uu saaka qaaday Farmaajo, ee ahayd xogashada kaarka qabyaaladda, ayaa iyana fashil ku soo dhamaatay, waxaana la filayaa in xiisadda ka dhex oloosan labada xaafiis sii kululaato, marka uu dib RW Rooble ugu soo laabto dalka.